Nematode- anonyengera tupukanana tembatatisi nezvirimwa zvinoteya
Mbatata cyst nematode (PCN) ndiyo yekutanga mbatatisi yekuUK. Inenge 65% yenyika inoshandiswa kurima mbatatisi inobatwa nePCN. Kudzora PCN, varimi parizvino vanovimba nemubatanidzwa wemaitiro anosanganisira; makemikari anokuvadza nharaunda, achiwedzera kutenderera kuti mbatatisi inongodyarwa kamwe chete mumakore masere, kana kusarudza mhando dzisingagadzirike.
Kuburikidza nechirongwa cheInovative Varimi, varimi vana vari muShropshire neLancashire vari kutarisa imwe nzira yekudzivirira iyo inoshandisa zvirimwa zvinozivikanwa semiteyo yezvirimwa izvo zvinodzivirira zvipembenene. Vakabatana naAndrew Wade (OptiGro), Ivan Grove (akazvimiririra), Matthew Back (Harper Adams University) naAnne Stone (AHDB Mbatatisi) kuti vabatanidze muedzo unoshanda munzira yakanakisa yekumisikidza zvirimwa muvhu reUK.
PCN musungo zvirimwa zvinoshanda sei?
Zviteyeso zvirimwa zvinotsanangurwa zvirinani se'kunyengera 'pane' kuteya 'zvirimwa. Iwo makemikari akaburitswa kubva mumusungo chirimwa midzi inoratidzira kuvapo kwechikafu chakakodzera uye inokonzeresa nematodes kubuda munzvimbo yavo yakachengeteka yekuhwanda mu cyst. Iyo nematodes inotanga kudyisa pamusungo kudyara midzi panzvimbo pematatata, pamberi pekuchekesa mbatatisi. Kubatsirwa kwakapetwa kaviri kunowanikwa nekutonga uku - nekudyara chirimwa chinoteyiwa, pachinzvimbo chemiti yavo yemazamu, nematodes haakwanise kuunganidza simba rakaringana rekubereka uye kupedzisa hupenyu hwavo, nokudaro ichideredza mikana yekuzadza mukati mevhu.
Kugadzira mbatatisi cyst nematode musungo zvirimwa
Varimi vakachera mbeu yemusungo chirimo mukupera kwaJune / kutanga kwaChikunguru, nguva pfupi mushure mekukohwiwa kwezviyo, uye kudyara kwechipiri kwakaitika mwedzi mumwe mushure mekutanga. Mhando mbiri dzezvirimwa zvakateyiwa dzakashandiswa - Solanum sisymbriifolium (inonamira nightshade) uye Solanum scabrum (African nightshade). S. sisymbriifolium inogona kudzikisa PCN densities kusvika ku80% asi zvave zvakaoma kutanga mu-munda. S. scabrum kuisirwa uye kushandiswa hakunyatsonzwisiswa muUK, asi kunobva kunzvimbo dzinopisa uye dzakakwirira, saka zvinogona kunge zviri nani kuUK climes.
Nematode- mbatatisi tupukanana nezviteyeso zvirimwa
Boka rakafungidzira kuti kudyara kwakadzama kunogona kushanda zvirinani pane kudzika, saka vafunga kuenzanisa kumisikidzwa kubva pakadzika mbiri dzekudyara: 1.5cm uye 3cm. Izvi zvirimwa zvine solanaceous hazvina kusarudzwa pamazera mazhinji kuti zviite zvakakodzera kurimwa; asi, zvirimwa zvemusango zvakaunzwa kushanda. Mumusango, mbeu dzakadai dzaizokura kubva mukati memichero yavo, kana mukati memanyowa emhuka. Nekudaro, patinenge tichitarisira kuti mbeu diki dzinocherwa zvakadzika; vanowanzokundikana kubuda.
Vachishandisa makamera akabatwa nemaoko uye drones, boka iri riri kuyera musungo chivharo chepasi uye vachigovana izvi kuburikidza neboka ravo reWhatsApp uye pamisangano. Kuverengeka kwePCN kwakatorwa usati wadyara chirimwa chemusungo uye chichafananidzwa mushure mekuparadzwa kwezvirimwa.
Parizvino, meseji yekutora kumba ndeyekuti kudyara kwekutanga, kudzivirira ivhu rakazara nemvura uye huwandu hwembeu dzinoita senge huri kubudirira. Kumisikidzwa kwekurimwa kwezvirimwa kwakasiyana zvikuru pakati pemapurazi, asi chakashamisa murongi wemumunda, Andrew Wade, S. sisymbriifolium yakadyarwa pa 1.5cm yakadzika ine chifukidziro chepamusoro chevhu, "Ndakafunga kuti scabrum ichanyanya kusimba ine biomass yakawanda. Takaparadzaniswa nemuedzo, ini ruoko ndakadyara imwe scabrum padivi. Izvo zvaive musi wa1 Chikumi uye zvakanyatsoita mushe. "Saka ingangoda mwero wepamusoro wekudzvara - ese ari maviri akadyarwa pamwero wakaenzana wembeu mukutongwa." Zvakawanikwa zvinogona zvakare kuratidza fungidziro yeboka kuti kudyara kwakadzika kunogona kushanda zvirinani pane kudzika.
Wona yazvino musungo chirimwa kufambira mberi vhidhiyo pano.
The kurasikirwa kwekupedzisira kwekubvumidzwa kweVydate, mushonga unouraya zvipembenene unoshandiswa kudzora mbatatisi cyst nematode (PCN), musi wa31 Zvita unounza lab-inotsigirwa neABH yemunda mukutarisisa sezvo varimi vazhinji vembatata vachitsvaga dzimwe nzira. Varimi vekuShropshire neLancashire vari kuongorora kushanda kwekurima zvirimwa zvekuteyesa kudzora nematode. “Zvinotonyanya kukosha kuve nehutachiona hwehutachiona pamwe nekufirwa kweVydate - taiziva kuti kuri kuuya asi pamwe kwete nekukurumidza. Kwemakore makumi maviri ndanga ndichironga kuti chikamu chehurongwa hwangu chichava chekubata chirimwa mukati medu kutenderera kupurazi, "akadaro Neil Furniss, maneja weME Furniss & Sons muShropshire.
Vydate Ban Inoreva Munda Lab Kutarisa Kudzora Potato Pest PCN Iri Mberi Kwenguva
Tags: Nematodenematodes muminda yematatatachipembenenekuteya zvirimwa
Mbatatisi kudiridza (raibhurari yeruzivo)
Dai 18, 2021
Dyara chirimwa - zvekuita nevhu repamusoro pH
Kutsvaga kwehutano hwevhu hwembatatisi kuri kuitwa
Mbatatisi inogona kupinza matatu akasiyana marudzi enitrogen
Chii chinoshandisika munda chinzvimbo chinonyatso kureva?
Hallo Potato. Vhiki rega rega tinotaura nezvembatatisi. Vanoona vedu vari pasi rese.
VaPolish Potato Varimi vanoratidzira vachipesana nemitengo yakaderera
Hurumende yeIndia inoganhurira kufamba kwembeu mbatatisi kuti ive nePatato Cyst Nematode